CySEC လိုင်စင်ကို ရရှိခဲ့ပါပြီ!
သတင်းကောင်းပါ – FBSသည် ယခုအချိန်တွင် CySECလိုင်စင်ကို ရရှိခဲ့ပါပြီ! ထိုလိုင်စင်ကိုရရှိရန်အတွက် လိုအပ်သည့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံမှသာ ရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် ယခုလိုင်စင်ကို ရရှိခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသော အကျိုးဆောင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် FBSအဖွဲ့သားများအားလုံး ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်ကြရပါသည်. ရှေ့လျှောက်လည်း ကျွန်တော်တို့၏ ဝန်ဆောသ်မှုများကို ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် ဆက်လက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားပါဦးမည်. ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ